I-Writing Shed Wales - Alpacas - Views - Log Fire - I-Airbnb
I-Writing Shed Wales - Alpacas - Views - Log Fire
Login, Narberth, Wales, i-United Kingdom
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Lindsay & Jackie
U-Lindsay & Jackie Ungumbungazi ovelele
Amamayela kude nokuphithizela, eduze nezinto ezikhulisa ukuphila okujabulisayo: ukucula kwezinyoni, ama-Alpacas anokuthula, nezinkanyezi ezikhanyayo ebusuku. Nokho phezu kwegquma, futhi hhayi kude kangaka; kunamabhishi angaphezu kuka-60, amadolobha asogwini, izindawo zokudlela ezinhle, nezindawo ezindala kunemibhoshongo.
Ibekwe Epulazini lethu le-Alpaca elingamahektare angama-20 - Idalelwe abantu ukuthi bathole indawo bona kanye bodwa.
Ilula futhi inomoya, inokubukwa kwe-panoramic, i-SuperKing Bed, ne-Cozy Cwtch evutha umlilo welogi. Yini enye obungayifuna?
Idizayinwe futhi yakhiwa umnikazi we-Architect, iyindawo yokuqhathanisa - Iphakanyiswe ngokubukwa okumangalisayo kwe-Alpacas yethu eklaba emasimini, nokho inokufinyelela ezingeni elivela emahlathini kanye naseShedini yokubhala.
I-SuperKing Bedroom ekhanyayo nevulekile eneBathroom en-suite kanye ne-Sitting Room ehlukile, ihluke ne-Cozy Cwtch Yeshede Lokubhala; lapho ungapheka khona ukudla noma ugone phambi kwe-Wood Burner. ujabule njengoba iminyango ivuliwe, ilalela ukuhlabelela kwezinyoni, nokushisa okuphuma emlilweni wezigodo.
Nethezeka ku-hammock, noma udle ngaphandle; endaweni yakho yehlathi, noma kuDekhi yakho yangasese ephakanyisiwe. Kuhle ukukhetha okuningi.
Ngolunye usuku; sithanda ukushayela siye esiqongweni segquma, ukuze sibuke kuqala lapho iLanga likhanya khona kakhulu; sabe sesisuka ngendlela esiyikhethile; kwenye yezindawo zethu zokudlela eziyintandokazi, Izinqaba, Izindawo zokudlela, noma Amabhishi - Ukuzizwa ukonelwe ukukhetha!
Indawo iyikho konke - futhi yilokho okwenza i-Writing Shed Wales ihluke. SiseHamlet encane yokungena. Isigodi somfula esinekhwalithi efana neNest - Njengesitsha esikhulu esiluhlaza. Ipulazi lethu i-Alpaca linqamula umgodi, lizungezwe ihlathi. Ungase ube nenhlanhla yokubona i-Otter, i-Kingfisher, i-Salmon yasendle, noma i-Badger; uqinisekile ukuthi uzowabona ama-Heron's, nama-Red Kites. Sine-Alpaca engaphezu kuka-30, ngakho-ke maningi ama-Alpaca kunabantu Abahlala Esigodini.
Phezu kwegquma elingekude kakhulu, kukhona inkwali yasendulo okwasikwa kuyo amatshe amakhulu endilinga yangaphakathi ye-Stonehenge, futhi nxazonke zethu kukhona amathuna asendulo, imibuthano yamatshe kanye nezindawo ezingokomoya ezandulela i-Stonehenge.
Kungekudala (eminyakeni engama-900 edlule) kwakhiwa iSt Davids Cathedral; kwakukade kukholakala ukuthi uhambo olubili oluya e-St Davids lwalulingana nohambo oluya eRoma, i-Login yayisendleleni eya kuyo, futhi manje isisendleleni ye-Landsker, exhuma ezindleleni ezihamba ngezinyawo kuyo yonke i-Wales. Okuhamba phambili ngokubona kwami i-All Wales Coastal Path, esisizungezile, njengoba simaphakathi nenhlonhlo.
Futhi ukuba maphakathi; imizuzu eyi-15 - 30 nje uma ushayela kunezindawo zokudlela eziningi kanye nokuzizwisa kwangaphandle nokuzijabulisa ongakhetha kukho.
Ngakho-ke yilokho okwenza indawo yethu ihluke - Inekhwalithi efana ne-Nest; enkabeni yakho konke okunikezwa yiWest Wales; indawo ekahle ukubuyela kuyo, kodwa ungase ungafuni ukuhamba.
Ibungazwe ngu-Lindsay & Jackie
Kuningi okumelwe ukwenze futhi ukubone lapha nasezindaweni ezizungezile zasemaphandleni kanye nogu. Le ndawo siyazi kahle kakhulu futhi sijabule kakhulu ukusiza izivakashi ngokukhetha kwazo.
ULindsay & Jackie Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Login, Narberth namaphethelo